လှချင်ရင် ပြင်၊ ချောချင်ရင် ပြင်
ပို့စ်တင်ချိန် - 12/12/2013 06:45:00 AM
(Written by အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (ဓမ္မပိယဆရာတော်) )
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကြီးကောင်ဝင်လာပြီဆိုရင် သိပ်လှချင်လာပြီ။ မှန်လေးတကြည့်ကြည့်နဲ့။ အဲဒီအရွယ်မှာ မိန်းကလေးလည်း လှချင်တယ်။ ယောက်ျားလေးလည်း လှချင်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အာရုံကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အာရုံက ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကို ခံယူလိုကြတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအရွယ်မှာ အလှအပကို ဂရုစိုက်လာတယ်။ အလှအပကို မက်မောလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အလှပြင်လာကြတယ်။
အလှအပဆိုတာ ကျက်သရေတစ်ပါးပါ။ ကျက်သရေရှိတော့ မင်္ဂလာရှိတာပေါ့။ လှချင်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အလှအပကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာကမှ အပြစ်ပါ။
"ထန်ပြင်းဒေါသကြီးတတ်က အလှပျက်မည်ဆို၊ ဒေါသကင်းစင် မေတ္တာယှဉ်၊ ကြည်လင်လှသကို" လို့ ဆိုတယ်။ သုဘလုလင်ကမေးလို့ ဘုရားက ဖြေတာပါ။ ဒေါသကြီးရင် အလှပျက်ပါတယ်၊ ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ စိတ်ဆိုးရင် ရုပ်ဆိုးပါတယ်၊ စိတ်ဆိုးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ စိတ်ကိုဆိုးရွားစေတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန်မာန ဣဿာမစ္ဆရိယအားလုံး ဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစေတသိက်ဆိုးတွေဟာ စိတ်ကို ဆိုးစေပါတယ်။ စိတ်ဆိုးရင်တော့ ရုပ်ဆိုးတော့မှာပါပဲ။ ရုပ်မဆိုးဖို့အတွက် စိတ်မဆိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ်လှဖို့အတွက် စိတ်လှဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုလှစေတာ၊ ရုပ်ကိုလှစေတာကတော့ အဓိကခန္တီမေတ္တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် "ဒေါသကင်းစင် မေတ္တာယှဉ် ကြည်လင်လှသကို" လို့ ဘုရားက မိန့်ပါတယ်။
"အ၀တ်နဲ့ပန်း ရေချမ်းလှူပါ၊ တံမြက်ကိုလှည်း၊ သည်းလည်းခံပါ၊ သီလစောင့်ငြား၊ မလားပါယ်ရွာ၊ ဘ၀တိုင်း ရှုတိုင်းလှနေမှာ" လို့ဆိုပါတယ်။ ရုပ်လှချင်ရင် အ၀တ်အထည်လှူပါ။ အ၀တ်အထည် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လှလှပပပေါ့။
"၀ဏ္ဏဒေါ ဟောတိ၊ ၀ဏ္ဏဒေါ-အ၀တ်အထည်ကို လှူဒါန်းသူသည် အဆင်းကို လှူဒါန်းသည်မည်၏" လို့ ဘုရားမိန့်ပါတယ်။ မြင်သူရူးလောက်အောင်လှတဲ့ ဥမ္မာဒန္တီဟာ အ၀တ်အထည်လှူဒါန်းခဲ့လို့ပါ။ ဥပ္ပလ၀ဏ်လှတာဟာ ပန်းလှူခဲ့လို့ ပါ။ ဒါကြောင့် လှချင်တဲ့သူဟာ ပန်းလှူရပါမယ်။
ရေဆိုတာ မေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတပါ။ ရေဆိုတာ ကြည်လင်အေးချမ်းပါတယ်။ ရေလှူတဲ့သူဟာ ရုပ်လှပါတယ်။ လှချင်ရင် ရေချမ်းလှူပါ။ ရေဆိုတာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် အေးချမ်းစေတဲ့ သဘောသတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းဖို့၊ စင်ကြယ်ဖို့၊ အေးချမ်းဖို့ ရေလှူရပါတယ်။ သူများစိတ်ကြည်၊ ကိုယ်စိတ်ကြည်နှင့် တလီနတ်ချစ်၊ ရောင်လှစ်ဆင်းလှ၊ သေကာလမှာ ရောက်ရနတ်ပြည် ဤငါးထွေ၊ မှတ်လေတံမြက်အကျိုးဆိုတဲ့ တံမြက်လှည်းလို့၊ သန့်ရှင်ရေးလုပ်လို့ရရှိတဲ့ အကျိုးတွေထဲမှာ ရုပ်အဆင်းလှပခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် လှချင်ရင် ဘုရားကျောင်းကန် လူအများသုံးစွဲရာနေရာတွေမှာ တံမြက်လှည်းရပါတယ်။သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရပါတယ်။
စိတ်ရဲ့အလှဟာ ခန္တီမေတ္တာပါ။ ဒီခန္တီမေတ္တာကြောင့် ရုပ်လည်းလှပါတယ်။ သည်းမခံနိုင်စရာကိစ္စကို အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ သည်းခံရပါမယ်။ သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ်မှာ မေတ္တာထားရှိရပါမယ်။ မေတ္တာဆိုတာ မပျက်ကောင်းတဲ့တရားပါ။ ဘုရားရှင်ဟာ ရှင်ဒေ၀ဒတ်၊ အင်္ဂုလိမာလ၊ နာဠာဂီရိဆင်၊ သားတော်ရာဟုလာ အားလုံးအပေါ် မေတ္တာတန်းတူထားရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မေတ္တာသည်သာ အောင်နိုင်ရာ။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကို မေတ္တာနဲ့သာ အောင်နိုင်တော်မူပါတယ် ။ လောကမှာ အလှပဆုံးအရာဟာ မေတ္တာပါ။ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို မေတ္တာနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းကသာ လှပတဲ့အဖြေထွက်တာပါ။
တရားတော်မှာ "ဒါနက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ပြည့်စုံစေတယ်၊ ချမ်းသာစေတယ်။ သီလက အသက်ရှည်စေတယ်၊ ကျန်းမာစေတယ်၊ ရုပ်ချော၊ ရုပ်လှစေတယ်" လို့ဆိုတယ်။ ဘာသာတရားရဲ့အခြေခံဟာ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာပါ။ ဒါနရဲ့အခြေခံဟာလည်း မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာပဲ။ လှူဒါန်းခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်းဆိုတာဟာ အလှူခံယူတဲ့သူ ချမ်းသာစေချင်တဲ့ မေတ္တာကြောင့်ပါပဲ။ အလှူခံယူတဲ့သူ မဆင်းရဲစေချင်တဲ့၊ ဆင်းရဲမှာကို မလိုလားတဲ့၊ ဆင်းရဲမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ ကရုဏာကြောင့်ပါပဲ။
သီလမှာလည်း မေတ္တာကရုဏာက အရင်းခံပါပဲ။ ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်သတ်မှာလဲ၊ ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှာလဲ။ ချစ်တဲ့သူကို ဒုက္ခရောက်အောင် ဘယ်လုပ်မှာလဲ။ သီလကိုချိုးဖောက်စေတာဟာ လောဘ ဒေါသတွေပါပဲ။ ဒါတွေဟာ စိတ်ကိုဆိုးစေတဲ့ တရားတွေပဲ။ မေတ္တာကရုဏာဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ လောဘကြီးသူ၊ ဒေါသကြီးသူရဲ့ သန­္တာန်မှာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာဆိုတာ မကိန်းဝပ်နိုင်ဘူး။ မေတ္တာ၊ ကရုဏာအား ကြီးသူမှာလည်း လောဘ ဒေါသတွေ နည်းသွားတယ်။ သီလရဲ့ အခြေခံဟာလည်း မေတ္တာ၊ ကရုဏာဆိုတော့ သီလစောင့်သူ၊ သီလလုံခြုံသူရဲ့စိတ်ဟာ လှတယ်။ စိတ်လှတော့ ရုပ်လှတာပါပဲ။
လှချင်သူဟာ ပြင်ရမယ်၊ ချောချင်သူက ပြင်ရမယ်။ အ၀တ်အထည်လှူပြီးတော့ ကံတွေကိုပြုပြင်ပါ။ လှချင်၊ ချောချင်ရင်တော့ မိမိတို့စိတ်တွေ၊ မိမိတို့ကံတွေကို မဖြစ်မနေပြင်ကြရမှာပါ။ ပြင်နိုင်သလောက် လှမယ်၊ ချောမယ်။ မိမိရဲ့အလှဟာ မိမိဘယ်လောက်ပြင်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲတည်ပါတယ်။ မပြင်လို့တော့ မလှနိုင်ပါဘူး။ ပြင်မှသာ လှမှာပါ။
စိတ်ကိုလည်းပြင်၊ ရုပ်ကိုလည်းပြင်၊ ပြုပြင်တိုင်းရ၊ ပြင်တိုင်းလှ၊ သုခနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မယ်" လို့ဆိုပါတယ်။ ဒုက္ခခပ်သိမ်းချုပ် ပြတ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ဝင် စံတော်မူသွားကြတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ဟာ သူတို့စိတ်ဟာ သူတို့စိတ်ကို အလှပဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်သွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ။ သာမန်လူအများစုကတော့ ရုပ်အလှကိုပဲ အဓိကထားကြပါတယ်။ ကားကောင်းကောင်း၊ ကားလှလှစီးထားပေမယ့် ဒီကားပေါ်က ကားပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်က ကားလိုလှရဲ့လား။ တိုက်ကောင်းကောင်း၊ တိုက်လှလှကြီးနဲ့ နေပေမယ့် ဒီတိုက်ပေါ်က တိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်က တိုက်လောက် လှပါရဲ့လား၊ ဒါအရေးကြီးတယ်။ တိုက်လှလှ၊ ကားလှလှက ပုဂ္ဂလိကအလှပါ။ စိတ်အလှကသာ ပတ်ဝန်းကျင်လောကအတွက် အလှပါ။
သင်္ခါရတရားဆိုတာ ပြုပြင်မှုကို အမြဲတောင်းဆိုနေပါတယ်။ ရုပ်ကိုလည်း ပြင်ရပါတယ်၊ စိတ်ကိုလည်း ပြင်ရပါတယ်။ မိမိတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို ပြင်နေရမှာက မိမိတို့ရဲ့ အဓိကတာဝန်ပါ။ ကံ စိတ် ဥတု အာဟာရ အထောက်အပံ့ကောင်းမှ ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ ဘ၀ခန္ဓာကို ကံနဲ့လည်း ပြုပြင်ပေးနေရပါတယ်၊ စိတ်နဲ့လည်း ပြုပြင်ပေးနေရပါတယ်၊ ဥတုနဲ့လည်း ပြုပြင်ပေးနေရပါတယ်၊ အာဟာရနဲ့လည်း ပြုပြင်ပေးနေရပါတယ်။ ကောင်းတာတွေး၊ ကောင်းတာပြော၊ ကောင်းတာလုပ်ပြီး ကံကိုပြုပြင်ရပါတယ်။ လောဘဒေါသတွေကြီးနေရင် စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။ လောဘဒေါသတွေ နည်းအောင်၊ သောက၊ ဒေါမနဿတွေ နည်းအောင် သမာဓိအလုပ်တစ်ခုခုနဲ့ စိတ်ကို ပြုပြင်ပေးရပါတယ်။ ဥတုသပ္ပာယဖြစ်အောင်လည်း နေထိုင်ရပါတယ်။ အာဟာရမျှအောင်လည်း စားသောက်ရပါတယ်။
စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟောလို့ဆိုလေတော့ စိတ်လှဖို့ကတော့ အဓိကပါ။ လောကထဲက အလှအပဟူသမျှ စိတ်လှသူတွေ ဖန်တီးထားကြတာပါ။လောကကို အလှဆင်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်လှတဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ စိတ်လှအောင် မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ အလှပြင်ကိရိယာတွေနဲ့ စိတ်အလှပြင်ကြရပါမယ်။ ဒါနသီလစတဲ့ ဘာသာရေး ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ စိတ်အလှပြင်ကြရပါမယ်။
လှချင်ရင်တော့ ပြင်ရပါမယ်၊ ချောချင်ရင်တော့ ပြင်ရပါမယ်။ အလှတရားဆိုတာ မြင်ရသူတိုင်းစိတ်ကို ကြည်လင်ချမ်းမြေ့စေပါတယ်။
မိမိတို့နိုင်ငံ အဘက်ဘက်က ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံမှာ ပြစရာက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတဲ့ အလှနဲ့ တောတောင်ရေမြေဆိုတဲ့ သဘာဝအလှပဲရှိတာပါ။ သဘာဝအလှတွေတောင် လောဘဇောတိုက်သူ လူ့မိစ္ဆာတွေကြောင့် တော်တော်လေး ပျက်စီးကုန်ပါပြီ။ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဘ၀ကတော့ တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကို မလှမပ ဖြစ်နေရပါပြီ။ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ခန့်ရှိတဲ့ ကျေးလက်လူနေမှု ဘ၀တွေကို လက်တွေ့ဆင်းကြည့်ပါ။ မြို့ပြဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေကို အနည်းငယ်မျှ စောင်းငဲ့ကြည့်ပါ။ ဘ၀တွေ ဘယ်လောက်ရုပ်ဆိုးကျည်းတန် ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကို မမြင်ရက် မကြည့်ရက်စရာတွေပါ။ သူတို့ဘ၀လေးတွေ အတန်အသင့် လှပလာအောင်၊ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်လေးဖြစ်လာအောင် ဘယ်သူတွေ အလှပြင်ပေးကြမလဲ။ ဘယ်သူတွေ အလှဆင်ပေးကြမလဲ။ အဓိကတာဝန်ကတော့ နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ယူထားတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စိတ်အလှကသာ သူတို့ဘ၀တွေကို အလှဆင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အလှပြင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လောကမှာ အမြင်လည်းကောင်းဖို့ လိုပါတယ်၊ အကောင်းလည်းမြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမြင်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် လိုအပ်တာက အလှတရားပါ။ အကောင်းမြင်ဖို့အတွက်ကလည်း လိုအပ်တာက အလှတရားပါပဲ။
လူတော်လူကောင်းဆိုတာ လောကကို အလှဆင်သူတွေပါ။ လောကက တောင်းဆိုနေတာကလည်း လောကကို အလှဆင်မယ့် လူတော်လူကောင်းတွေပါ။ အလှဆိုတာလည်း သဘာဝအလှရှိနေပေမယ့် အရာခပ်သိမ်း အများစုကတော့ ပြင်မှလှမှာပါ။ လောကကို အလှပြင်နိုင်ကြပါစေ။ လောကကို အလှဆင်နိုင်ကြပါစေ။ လောကအလှကို ဖော်ကျူးနိုင်သော နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြပါစေ။
ကညွတ်ဟာ ဆီချိုရောဂါ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လက်နက်ဟုဆို
မြေယာသိမ်းမှုများ အတိတ်၏ အရိပ်မည်းကြီးထိုးနေဆဲလား
ယခင်အပတ်ထက် ဆန်တစ်အိတ် ကျပ်တစ်ထောင်ခန့် မြင့်တက်
အတိတ်သမိုင်း နှင့် သင်ခန်းစာ
ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော် ဘုရားဝင်းအတွင်း လုံခြုံရေးအ...
ဆယ်ကျော်သက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေ...
သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်ကို အရေးယူပေးရန် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ...
တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ကတော့ကမ်းရွာတွင် လမ်းဖောက်ရာမှ ရေ...
The Ideal Beauty ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ အချောဆုံးအလှမယ် ၅၀ တွ...
ဒီဇိုင်နာတွေက သူဌေးတွေ မဟုတ်ဘူး
ထိုင်းစစ်တပ် ဘက်မလိုက်ကြောင်း ပြသ
ကျားဟော်မုန်းများခြင်းက အသက်တိုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေ
ဆား လျော့စားခြင်းက သေချာပေါက် အကျိုးရှိ
နှလုံးခုန်နှုန်း အသက်ရှုနှုန်း တိုင်းရန်အတွက် တီထွင်လ...
7 Day News Journal vol.12-no.40 (11-Dec-2013)
ယူကရိန်းတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားများကို ရဲ...
Sea Games အခမ်းအနားကို အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ကြည့်လိုေ...
Auto World Car Journal (13-Dec-2013)
မင်းလှဘူတာအနီး လူတစ်ဦး ရထားတိုက်မိ သေဆုံး
ရေချိုးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
သန္ဓတားဆေးများက ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေနိုင်
နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၌ ဆီးဂိမ်းကာလအတွင်း မြန်မ...
Theme Song ဆုရ ရောင်စုံဥယျာဉ် သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီ...
မြဝတီ သတင်းစာ (12-12-2013)
ရတနာပုံ သတင်းစာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၃)
အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် - sports view journal (12-...
The Leader ရှေ့ဆောင် သတင်းဂျာနယ် (13-Dec-2013)
The Leader ရှေ့ဆောင် သတင်းဂျာနယ် (၆-ဒီဇင်ဘာ-၂၀၁၃)
စာမရတဲ့ ကျောင်းသူတွေကို နမ်းခိုင်းပြီး အိမ်ပြန်တို...
တ​ရုတ်​လုပ်​ငန်း​ရှင်​များ​ကို ​တာဝန်​သိ ​ရင်း​နှီ...
အလယ်တန်း ကျောင်းသားများ ကျောင်းလခ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်
အကျဉ်းစခန်းများ အချုပ်စခန်းများတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်...
လူမှုဖူလုံရေး အာမခံထားသော အမျိုးသမီးများ မီးဖွားခွ...
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးများ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြေ...
ဆီး​ဂိမ်း​ဖွင့်​ပွဲ ​တ​ရုတ်​အ​ကူ​အ​ညီ​ဖြစ် ​တင်​ဆက...
ရဲစခန်းအတွင်း အချုပ်သားသေဆုံးမှု စခန်းမှူးကို ရာထူး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရန် ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ မကျ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဆောင်နေ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံရေး...
အသွင်အမျိုးမျိုးနှင့် တရုတ်နို့မှုန့်များ အသက်အန္တရာ...
အသက် ၁၈ နှစ်လောက် ပုံစံမျိုးတော့ ရိုက်လို့မရဘူး အေ...
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ဖေါက်ဖျက်မှုနဲ့ RBS ဘဏ်ကို...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အလုံအလောက် မထုတ်နိ...
၂၀၁၂ခုနှစ်အတွင်း ငှက်ဖျားကြောင့် လူပေါင်း ၆ သိန်းေ...
လွတ်မြောက် နိုင်ကျဉ်းနှစ်ဦး ချက်ချင်း ပြန်အဖမ်းခံရ
ဆီးရီးယား အတိုက်အခံကို အကူအညီရပ်
စစ်တွေမှာ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်...
Person of the Year ပုပ်ရဟန်းမင်းကိုရွေး
Mandela ရုပ်အလောင်း အများပြည်သူ ကြည့်ရှုခွင့်ရ
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ၁၂-၁၂-၁၃
New Light of Myanmar (12-12-13)
သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်သူတွေကို စိတ်...
မြို့ကွက်သစ်ဖော်ရန်နှင့် ရဲတပ်ရင်းဖွင့်ရန် လယ်မြေသ...
ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်အလုံး ၂,၆၀၀ ဖြန့်ဝေ
လား​ရှိုး​မြို့ ​လောင်း​က​စား​ရုံ​များ ​ပိတ်​ပေး​ရန...
သိန်းလေးရာကျော်တန် စိန်နှစ်ပွင့် ပွဲစားက ပေါင်ပစ်ဟ...
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း စစ်သင်္ဘော ငါးစင်း၊ တို...
တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှု...
ကမ္ဘာ့အာမခံဈေးကွက် လေ့လာရန် ဂျပန်သို့ ပထမဆုံး သွားမည်
၁ မီးနစ်သာကြာသော ကမ္ဘာ့အတိုဆုံး ဇာတ်လမ်း
ပြည်တွင်း လေဆိပ်များကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း လုပ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာရှဆင် ဒုတိယအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်
ဆီးဂိမ်းမှာ မီဒီယာတွေ အခက်တွေ့ရတဲ့ ကိစ္စ ဦးရဲထွဋ်ရ...
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန် တောင်းဆိ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံအထိ...
ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးစံချိန် ရော်နယ်ဒို ချိုးဖြတ်
ဆီးဂိမ်းစ်နှင့် ပွဲပြီးမီးသေ မဖြစ်စေလိုပါ
မရမ်းကုန်းက " မမကြီး" အမည်ရှိ အနှိပ်ခန်းကို ရဲစခန်...
သိန်း ၁၀၀ တန် တိုက်ခန်း ၀န်ထမ်းများကို အရစ်ကျ ရောင...
ဘယ်သူတွေ တိုင်းပြည် ဘယ်လောက် ချစ်သလဲ မှတ်ကျောက်တင်...
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်း တရုတ် အဓိက ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဖွင...
တိကျသော အဖြေရမှ မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်း ရုပ်သိမ်းမည်
အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် မြန်မာ့ကျန်းမာရေး အဆိုးရွားဆုံ...
ဆီးဂိမ်းတွင် မြန်မာတို့ မည်သို့မည်ပုံ အနိုင်ယူမည်နည်း
လူထုအားနဲ့ အာဏာသိမ်းမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံရေး
မြူးနစ်မှာ ရှုံးကြွေးပြန်ဆပ်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး